June 2010 ~ brazesh
June 20, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
हालसालै एकदिन अभिनेता राजेश हमालसँग लामो गन्थन भयो । प्रसंग थियो, त्यसको केही समयअघि कुनै अन्तर्वार्तामा उनले भनेको कुरा । अन्तर्वार्ता लिने मान्छेको एउटा प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले आफ्नो कुनै बानी नभएको कुरा बताएका थिए । लत, कुलत वा कुनै कुराको आशक्ति नहुन सक्छ । तर, कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि बानी नै नहुनु कसरी सम्भव हुनसक्छ ? निकैबेर गन्थन गरेपछि पनि त्यसको कुनै चित्तबुझ्दो तर्क निस्कन सकेको थिएन ।
परभिाषाको कुरा गर्ने हो भने नियमित व्यवहारमा दोहोरएिर भइरहनेे र नजानिँदो किसिमले पनि देखा पररिहने कुरालाई बानी भन्छन् । कहिलेकाहीँ यो अनिवार्य भइसकेको हुन्छ । बानी भनेको अचम्मको कुरा हुने गर्छ । यो कसरी लाग्छ, किन लाग्छ भन्ने कुराको कुनै ठोस कारण पनि हुँदैन । तर, मान्छेलाई जीवनका हरेक प्रहरहरूमा केही न केही बानीहरू लागिरहन्छन् । अनि, लागेपछि ती बानीहरूले मान्छेलाई सितिमिति छोड्दैनन् । अदृश्य र अस्पष्ट ती बानीहरू कुनै अभिन्न मित्रझैँ मान्छेको साथमा सधँै रहिरहन्छन् । कुनै बानी मान्छेले जन्मँदै वंशानुगत रूपमा लिएर जन्मेको हुन्छ भने कुनै वातावरण, परििस्थति, संगत र अरू कुराहरूले उसभित्र ती बानीहरूको बीजारोपण गरििदन्छन् । बानीहरू अनेकौँ प्रकारका हुने गर्छन् । कुनैले मान्छेलाई फाइदा गर्छन्, कुनैले हानि पनि गर्छन् । यिनीहरूको उपस्िथति यति प्रभावकारी र सशक्त हुन्छ, मान्छेले हानि गर्ने बानीका बारेमा सबै बुझ्दाबुझ्दै पनि तिनलाई हत्पति छोड्न सक्दैन । लतलाई एकछिन छोडेर कुरा गर्ने हो भने पनि मान्छेका असंख्य बानीहरू हुन सक्छन् । कति बानीहरू यस्ता हुन्छन्, जसका बारे मान्छे आफैँ अनभिज्ञ हुन्छ । कुनै पनि मान्छेले साधारणतया आफ्ना बानीहरूका बारे केलाएर हेर्ने काम गरेको हुँदैन । माया गर्ने बानी, कुरा काट्ने बानी, काम छल्ने बानी, अरूको खुट्टा तान्ने बानी, सानो कुरामा बढी चिन्तित हुने बानी, रुने बानी, ठग्ने बानी, जानीजानी आफू मूर्ख हुन्जेल भावुक हुने बानीजस्ता असंख्य बानीहरूका बारे कुरा गर्न सकिन्छ, जसको कुनै अन्त्य पनि हुँदैन ।
केही बानीहरू यस्ता हुन्छन्, जसले एउटा ठूलो समुदाय, समाज, सहर वा सिँगै मुलुकलाई सामूहिक रूपमा लान पनि सक्छन् । वातावरण, परििस्थति र केही हदसम्म बाध्यताले पनि यस्ता बानी लाग्नमा सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । एउटा त्यस्तै बानी हो, झूटो बोल्ने । अचेल हामीमा त्यस बानीको विकास भइरहेको छ । बानी नजानी-नजानी पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुराको यो पनि एउटा गतिलो उदाहरण हो । यो एउटा यस्तो बानी हो, जसले बोल्ने मान्छेलाई क्षणिक फाइदा भए पनि उसका वरपिरकिा थुप्रै अरूलाई सामूहिक र दूरगामी रूपमा असर गररिहेको हुन्छ । झूटो बोल्नेहरूको एउटा दोस्रो वर्ग पनि हुन्छ, उनीहरूले आफूलाई बचाउ गर्ने एउटा कुतर्क पनि हुने गर्छ । उनीहरू साँचो नबोल्नुलाई झूटो बोल्नुभन्दा फरक कुरा हो भन्ने मान्छन् । तर, शब्दलाई मात्र नहेर्ने हो भने यी दुवै कुरामा केही भिन्नता हुँदैन । सानो तहबाट ठूलोसम्म, व्यक्तिगतदेखि राजनीतिक रूपमा हरेक मान्छेहरूमा यो बानी विस्तारै लागिसकेको छ र झन् बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
बाटोमा हिँड्दा हरेक दिन हामी केही यस्ता मानिसहरू देख्छौँ, जो खुलेआम एक ठाउँमा रहेर मोबाइल फोनमा आफू अन्तै भएको बताइरहेका हुन्छन् । कोहीकोही त बानेश्वरको सडकमा आफू विराटनगर भएको दाबी गररिहेका भेटिन्छन् । अहिले त रोमिङ्को पनि सुविधा भएकाले अरू नै देशमा छु भन्न पनि पाइन्छ । कतिपय मानिसहरू आफूलाई व्यस्त देखाउनका लागि, आफ्नो विशिष्टता प्रमाणित गर्नका लागि पनि यस प्रकारका झूट बोल्छन् । एक जना महाशय बबरमहलको सडकको किनारमा सियाँलमा उभिएर ठेलामा बेच्न राखेको खरबूजा चपाउँदै कसैलाई फोनमा आफू एउटा जरुरी मिटिङ्मा भएको बताइरहेका थिए । पहिले-पहिले भए फोनमा यस्ता किसिमका झूट बोल्न पाइन्नथ्यो । अचेल प्रविधिले बनाइदिएको सजिलोका कारण यस्ता झूटहरू आँखा नझिम्क्याईकनै बोल्न सकिन्छ । कसैको फोन आयो, कुरा गर्न मन लागेन भने नउठाएर फोनै आएको छैन भनिदिनचाहिँ दूरसञ्चारको 'स्तरीय' सेवाले सजिलो बनाएको छ ।
नेता र राजनीतिक पार्टीहरू यो बानीका सबैभन्दा प्रखर खेलाडीहरू हुन् । उनीहरूचाहिँ निकै नै ठूला महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुराहरूमा पनि आरामसँग झूटो बोल्न सक्षम हुन्छन् । पछिल्ला केही समयमा हाम्रो देशमा भएका कुराहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने यसलाई पुष्टि गर्ने मनग्य उदाहरणहरू फेला पर्छन् । उनीहरूले गरेका वाचाहरू एकातिर राखेर तीमध्ये कति पूरा भए कति भएनन् भनेर लेखाजोखा गर्ने हो भने सायद ऐनामा अनुहार हेर्न सक्दैनन् उनीहरूले । अहिले पनि यति बुँदे र उति बुँदे सहमति भन्ने नाममा उनीहरू एकापसमा खुलेआम झूटो बोलिरहेका छन् । अनि, कसले झूटो बोलेको भन्ने दोषारोपण र आरोप/प्रत्यारोप गर्नमा उनीहरू व्यस्त भइरहेका छन् । माथिबाट सुरु भएको यो झूटो बोल्ने बानी तलसम्म पनि आइपुगेको छ । झूटो बोल्नाका क्षणिक फाइदा हुन्छन् तर त्यसलाई कायम राख्नका लागि यति धेरै कसरत र अरू झूटो कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यसका सामु साँचो कुरा बोल्नु निकै सजिलो हुने गर्छ । तर, यति थाहा हुँदाहँुदै पनि हामी अनावश्यक ठाउँहरूमा पनि किन झूटो बोल्छौँ ? के हामीमा यो बानीले नजानिँदो रूपमा जरो गाडी नै सकेको हो त ?
डन्ट से यस ह्वेन यू वान्ट टू से नो भन्ने किताबले मान्छेको यही बानीका बारेमा विश्लेषण गरेको छ । झूटो बोल्नेहरू कसरी आफू र अरूहरूको लक्ष्यलाई प्रभावित गररिहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई यसले अथ्र्याउँछ । ती कुराहरूबाट पन्छिन सिकाउने त्यस पुस्तकले संसारका धेरै मान्छेका व्यक्तिगत, पारविारकि र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक असर पारेको दाबी पनि गर्छ । अनि, खराब बानी कसरी हटाउने भन्नेबारेका एक जना ज्ञाता लेखक बिल बोर्सर्ड भन्छन्, "खराब बानी सुधार्नका लागि त्यो लाग्नासाथै स्थापित हुनुअघि प्रयत्न गर्नुपर्छ । स्थापित भइसकेको हो भने ती बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कारण र कुराहरूबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ ।"
त्यसैले हामीले एकपटक फुर्सद लिएर सोच्नुपर्ने बेला हो यो । के हामीमा झूटो बोल्ने बानी स्थापित नै भइसकेको हो त ? हो भने ती के कुराहरू हुन्, जसबाट हामी टाढा रहनुपर्छ, बच्नुपर्छ !
राजनीतिः केटाकेटी खेल
June 06, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
हामी केटाकेटी हुँदा विभिन्न खेलहरू खेल्ने गथ्र्यौं । जतिजति ठूला हुँदै गयौँ, हाम्रो शारीरकि र बौद्धिक विकास पनि हुँदै गयो र त्यससँगै हामीले खेल्ने खेलहरू पनि परविर्तन हुँदै गए । हाम्रो विकाससँगै खेलहरू परमिार्जन र परविर्तन हुँदै गए । परविर्तन भनेको संसारको एक मात्र अकाट्य र दिगो कुरा हो । त्यससँग आफूलाई आत्मसात् गरेर चल्न नसक्ने हो भने कुनै पनि कुरा, वस्तु, मान्छे, विचार, सिद्धान्त, वाद, सोच वा युगको पतन हुन्छ, विलय हुन्छ । आफूलाई विद्वान् सोच्नु र अरूलाई मूर्ख ठान्नु दुई अलग कुराहरू हुन् । आफूलाई विद्वान् मात्र ठान्ने भ्रमले मान्छेलाई जति बिगार गर्छ, अरूलाई मूर्ख ठान्ने भ्रमले त्यसभन्दा कैयौँ गुना बढी नोक्सान गर्छ । हातमा शक्ति र काँधमा जिम्मेवारी भएका मान्छेहरूमा त्यो भ्रम पलाउनु भनेको त झन् ठूलो खतरा हो । बाँदरको हातमा खुवा भाग लगाउने जिम्मा भयो भने त्यसको परण्िााम के हुन्छ भन्ने कुरा सायदै विज्ञ पाठकहरूलाई भनिरहनुपर्ला । तर, हाम्रो देशको राजनीति र तिनका ठेकेदारहरू अचेल यो परम्सत्यबाट विमुख भएर उल्टो धारमा हिँडिरहेका छन् । उनीहरू या त साह्रै नै मूर्ख र विवेकहीन हुन् या उनीहरू आफूप्रति अति आशावादी छन् र अतिविश्वासको सिकार भइरहेका छन् । त्यसैले होला, उनीहरू अहिले पनि विवेकहीन केटाकेटीहरूले खेल्ने खेलहरू खेलेर देशलाई नयाँ दिशातिर डोर्‍याउन खोजिरहेका छन् । यस्तै केटाकेटी खेल खेलेर नयाँ नेपाल बनाउने कुरामा हामीलाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । ध्यान दिएर हेर्ने हो भने उनीहरूका खेलहरू कस्ता छन् भनेर खुट्याउन कसैलाई पनि हम्मे पर्दैन ।
अहिले प्रचलित पहिलो खेल तेलकासा हो । तेलकासामा एउटा चोर हुन्छ, त्यसको काम अरू कसैलाई समातेर आफू खेलाडी बन्ने हुन्छ । अरूहरूचाहिँ त्यसले आफूलाई चोर बनाउन नपाओस् भनेर भाग्ने गर्छन् । हाम्रा महान् राजनीतिज्ञहरू जिम्मेवारीको तेलकासामा रमाइरहेका छन् । चोर र खेलाडीहरू मरहित्ते गरेर जिम्मेवारी अर्कोको टाउकामा हाल्न लागिपरेका छन् । आफूबाहेक अरू सबै बिटुला र हुन नसकेका कामहरू आफ्नोबाहेक अरू सबैका अक्षमताका कारण मात्र हुन नसकेको हो भनेर प्रमाणित गर्नमा नै यिनीहरू आफ्ना सारा शक्ति, सामथ्र्य र ऊर्जाहरू खेर फालिरहेका छन् ।
यिनीहरू रमाइरहेको अर्को खेल हो कानेकाने पिच्चा । यसमा चाहिँ चोरको आँखामा कालोपट्टी बाँधिएको हुन्छ । तसर्थ, उसले केही पनि देख्न सक्दैन । अरूहरूका आवाजको भरमा उसले तिनलाई भेट्ने प्रयास गर्छ । स्पष्ट कुरा हो, आँखामा पट्टी बाँधेपछि मान्छे दिग्भ्रमित हुन्छ । उसका लागि अँध्यारो र उज्यालोमा केही भिन्नता हुँदैन । उसले आफ्नो वरपिरकिो कुनै पनि कुरालाई देख्न सक्दैन, त्यसो भएपछि उसको चेतना लुप्त हुन्छ । आफू अगाडि बढिरहेको छु, पछाडि सररिहेको छु वा खाल्टोमा खस्न लागेको छु भन्ने केही पनि उसलाई थाहा हुँदैन । अन्दाजको भरमा ऊ हावामा आफ्ना हातहरू हल्लाएर केही समात्न सकिन्छ कि भनेर प्रयत्नरत हुन्छ । हाम्रो राजनीतिमा हावी भएका देशका नेता भनाउँदाहरू अलि पृथक् किसिमको कानेकाने पिच्चा खेलिरहेका छन् । यो परमिार्जित खेलमा चोर मात्र होइन, मैदानमा भएका सम्पूर्ण खेलाडीहरू आँखामा कालो पट्टी बाँधेर दिशाविहीन र दिग्भ्रमित भएर कुदिरहेका छन् ।
अहिलेको अर्को लोकपि्रय खेल हो, सेभेन स्टोन । यो खेल बडो रोचक छ यिनीहरूका लागि । किनभने, यसको अवधारणा नै बिगार र विनाश हो । यसले बनाउन होइन, भत्काउन सिकाउँछ । स्वाभाविक कुरा हो, कुनै पनि कुरा बनाउन जति गाह्रो हुन्छ, नबनाउन अथवा बिगार्न त्यति नै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो खेल उनीहरूका लागि साह्रै घतलाग्दो र पि्रय छ । यस खेलमा सामान्यतया दुई समूह हुन्छन् । सातवटा चुच्चामुच्चा, आकारप्रकार नमिलेका ढुंगाहरूलाई चाङ लगाएर अडाउने प्रयास गर्ने एउटा समूहको प्रयासलाई अर्को समूहले सफल हुन नदिनुमै उनीहरूकोेे बहादुरी, खेलकौशल र गर्वको कुरा मानिन्छ । चाङ लगाउन खोज्नेहरूले थुपारेका ढुंगाहरूलाई चारैतिरबाट हिर्काएर भत्काउन पाइन्छ । त्यतिले नभए तिनको ढाडै खुस्कने गरी बलले हिर्काउन पनि पाइन्छ । अहिले त्यही खेल सफलतापूर्वक चलिरहेको छ र सफलताको अभूतपूर्व कीर्तिमान कायम गर्दै गौरवशाली दुई वर्ष पूरा गरेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरसिकेको छ । एउटा कुनै समूह ढुंगाको चाङ लगाउन कटिबद्ध हुन लाग्नासाथ अर्को समूह त्यसलाई भत्काउन तिनका ढाडमा बलले हिर्काउन सुरु गरहिाल्छ । अनि, यिनीहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न थाल्छन् । एउटाको छवि कसरी ध्वस्त बनाउने भन्नेमा अर्को लागिपरेको छ । एउटाले भनेको कुरामा अर्कोले अत्तो नथापी खाएको पचाउन सक्दैन । हुन त खान पनि यति गरष्िठ कुरा खाएका छन् यिनीहरूले, त्यसलाई पचाउन गाह्रो हुनु अनौठो होइन । देश खाएका छन् यिनीहरूले । त्यसैले यिनीहरू जानाजानी यस्तो विवाद खोजेर भिड्न थाल्छन्, जसको कुनै समाधान हुँदैन भन्ने यिनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ ।
अहिले यिनीहरू कुखुरा पहिले कि फुल भन्ने विवादमा अलमलिएका छन् । यिनीहरूको कसैको पनि बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन । आज भनेको कुराबाट भोलि पछाडि हट्नु भनेको यिनीहरूका लागि चुट्की बजाएभन्दा बढी सजिलो कुरा हो । एकथरी कुखुरा पहिले भन्ने अडानबाट हटेका छैनन् भने अर्काथरी फुल पहिले भन्ने रट लगाइरहेका छन् । यो विवाद उनीहरूको 'इगो'सँग यसरी गाँसिएको छ, त्यसका सामु देश, जनता र तिनको भविष्य पनि गौण बनेको छ । यी मानिसहरूले नबुझेको एउटै कुरा छ । अरूले कोरेको धर्साभन्दा लामो धर्सा आफूले कोरेर पनि आफू सफल हुन सकिन्छ । तर, यिनीहरू त अरूको धर्सालाई मेटेर आफ्नोभन्दा सानो बनाएर आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्ने खेलमा लागेका छन् ।
यिनीहरूको यो अविवेकी र स्वार्थको केटाकेटी खेलको दुष्परण्िााम भने हामी जनताले भोग्नुपर्छ, दुःखको कुरा त्यति मात्र हो ।
June 03, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ बायाँ फन्कोबाट
राजनीतिभन्दा पृथक् विषयहरूमा 'बायाँ फन्को'लाई सीमित राख्ने ध्याउन्न बेलाबेला असहज हुने गर्छ किनभने अचेल हाम्रो समाजमा हरेक कुराको राजनीतीकरण हुने गरेको छ । त्यसैले बेलाबेला हाँडीबाट उछिट्टएिको तातो मकैजस्तो बनेर 'बायाँ फन्को' राजनीतिको भुंग्रोमा हाम फाल्न पुग्छ, नचाहँदा नचाहँदै । यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ । राजनीतिक गतिविधि र त्यहाँको अखडामा हुने उठापटकले एउटा आमनागरकिलाई पर्ने हदसम्मको असर पर्ने बेलामा आँखा चिम्लेर समस्याहरू नदेखिए पनि हराउनचाहिँ हराएका हुँदैनन् । देश हाँक्ने मान्छेहरूले गरेका कुराहरू जटिलताको पराकाष्ठामा पुगेर भ्रामक भएको बेलामा, तिनका कुराहरू बाझेर मान्छेपिच्छे आएका फरक अभिव्यक्तिहरूले आफ्नो बुझ्ने क्षमतामा नै धमिरा लगाइदिएको बेलामा हामीजस्ता नागरकिलाई आफू र आफ्नाहरूका साथै देशकै भविष्यका बारेमा अत्यास लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।